သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: ဟိုရောက်သည်ရောက် သင်္ကြန်အတွေးများ...။
ကလေးတွေကတော့ ရက်ချိုးရေတွက်ရင်း စောင့်မျှော်နေပြီ။ ဒါကတော့ ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကလိုပါပဲ.. နောက်တော့လည်း သူများပျော်တာတွေကို ငေးကြည့်ရင်း ညနေဖက်မှ အိမ်ရှေ့မှာ ရေပုံးချ.. လာသမျှ ခွေးရော ကြောင်ရောမကျန် ရေတွေလှမ်းပက်.. ပြီး အိမ်နီချင်းချင်း ရေတွေပြန်ပက်ကြရင်း ထပ်တိုးလာမယ့် သင်္ကြန်တခုပဲ ဖြစ်နေမှာပါ...။
သင်္ကြန်ဆို အင်းယားလမ်းထဲက မဖြတ်ဖြစ်ဖို့ သတိထားဖြစ်ရင်းနဲ့ကို ဖြတ်ဖြစ်နေကျ...။ ရေပက်ခံ သင်္ကြန်ကားတွေ ကြားမှာ ရေထိမခံပဲ တံခါးအလုံပိတ် ချွေးတွေအောင်းရင်း ဒုက္ခခံဖြစ်ခဲ့တာကလည်း နှစ်တိုင်းလိုပါပဲ...။
ကိုယ်တိုင်က သင်္ကြန်မှာ ပျော်လေ့ မရှိတော့ သင်္ကြန်ဆိုတာအတွက် အင်တိုက်အားတိုက် သိပ်မရှိတတ်ခဲ့ဘူးလေ..။ ဒါကတော့ သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း တချို့သော တချို့သူတွေလို ဇာတ်လမ်း မှတ်တမ်းလှလှလေးတွေလည်း မပိုင်ဆိုင်ဖူးခဲ့သလို မေ့ထားချင်စရာ အတိတ်ဟောင်းတွေလည်း မရှိခဲ့လို့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ : P ကျမ မိဘတွေက သင်္ကြန်ဖူးစာဆိုတော့ သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း ဖေဖေက မေမေ့ကို သင်္ကြန်ရေလောင်းလေ့ရှိတယ်..။ မေမေကလည်း စိတ်ဆိုးသလို ပြုံးတုံ့တုံ့လုပ်ရင်း အတိတ်ကို ပြန်အောက်မေ့ တနှစ်လုံး မတည့်ခဲ့သမျှ သင်ပုန်းချေဖြစ်နေသလားတော့ မသိနိုင်....။
တကယ်ဆို အတာ သင်္ကြန်ပွဲရဲ့ အနှစ်သာရက အပျော်သက်သက်ရယ်တော့ မဟုတ်..။ တနှစ်တာရဲ့အပူဆုံးအချိန်၊ မြန်မာ့နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကူးမယ့် အချိန်မှာ အတာသင်္ကြန်ရေစင်နဲ့ ဖြန်းပက်လို့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အေးမြစေဖို့ မေတ္တာရေစင်နဲ့ သွန်းလောင်းဆုတောင်းပေးတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဆောင်သလို နှစ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးတွေ ကင်းစင်လို့ နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ ဖြစ်စေဖို့ အတာရေစင်နဲ့ သန့်စင်လို့ နှစ်သစ်ကို ကြိုတဲ့ ပွဲပါပဲ..။
နှစ်တွေက ပြောင်းလာသလို ခေတ်တွေကလည်း ပြောင်းလာပါတယ်...။ အရင်က သင်္ကြန်ဆိုတာ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရင်း အချင်းချင်း ရေပက်ဖျန်းကြမယ်... နောက်တော့ ပျော်ကြရွှင်ကြ... တချို့ကျတော့ သူများတွေ အထိတ်တလန့်ဖြစ်မှ ပျော်တတ်ကြ.. သူများတွေကို အေးချမ်းစေဖို့ဆိုတာထက် ခေါင်းမမော်နိုင်အောင် ရေတွေမွန်းနေအောင် မီးသတ်ပိုက်တွေနဲ့ထိုးလို့...။ ငယ်ငယ်ကတော့ နို့ဆီခွက်နဲ့ ခွက်စောင်းခုပ်တဲ့ ဒဏ်ကို ကျောကော့အောင် ခံခဲ့ဖူးရဲ့။ ရေပူဖောင်းတွေကို မြင်ရင်လည်း အသက်ရှူဖို့တောင် မေ့နေတတ်ခဲ့တာ (ဒါကြောင့်ပဲ သင်္ကြန်ကို ကြောက်ခဲ့သလားမသိ)။
ပျော်ကြပါစေလေ... ပျော်တာတွေမြင်ရင် စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့. လူငယ်တွေ ပျော်နေကြတာကိုလည်း ၀မ်းသာမိပါတယ်..။ လူငယ်တွေဘာဝ ပျော်ကြတာ သဘာဝပဲလေ...။ ဒါပေမယ့် သင်္ကြန်ပြီးရင် ထွက်လာတတ်တဲ့ ပုံတွေ မြင်ရတာတော့ ......။
Posted by tg.nwai at 2:33:00 AM
သင်္ကြန်ကို သိပ်ပြီးတော့ မလည်ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်္ကြန်မှာ ကျနော့်အတွက် အမှတ်တရတွေလည်း ရှိတယ်။း)
လာမည့် မြန်မာ နှစ်သစ်မှာလည်း ပျော်ရွှင်ပါစေ အမရေ..
ဟုတ်တယ်အစ်မရယ်..သင်္ကြန်မှာ ဇာတ်လမ်းမရှိလို့လား. မသိ။
ရွှေရင်အေးတို့။ မုန့်လုံးရေပေါ်ကိုပဲ လွမ်းနေမိတယ်။ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တော့ ငှက်လွှတ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
ပို့စ်ထဲက သင်္ကြန်ဖူးစာ အကြောင်းလေး ကြည်ကြည်နူးနူး ဖတ်သွားတယ်။
အဲလိုလုပ်ရတဲ့အချိန်...သို့ကလို မသိဂီ င်္လိုပဲ သနားစရာ
အပြင်မထွက်ခဲ့ဖူးလေတော့..)သင်္ကြန် is meaningless for me !! :)
ကျနော်တို့ ခေတ်တုံးက သင်္ကြန်ကို လူကြီးတွေက ပြောလေ့ရှိတယ် - မင်းတို့ သင်္ကြန်ကလည်းကွာ... - ဆိုပြီး....
ခုခေတ် လူငယ်တွေရဲ့ သင်္ကြန်ကိုကြည့်ပြီးတော့... - အင်း.... ဘာမှ မပြောချင်တော့ပါဘူး...း)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ... ပန်းတောက်ရနံ့လေးတွေကို လွန်းဆွတ်နေခဲ့ရတာကတော့ ၂၁ နှစ် ရှိနေပြီ...
သင်္ကြန်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းတော့ ကျွန်တော့ဆီမှာလည်း မရှိပါဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း 3/4 နှစ်လောက်က အဖေနှင့် အမေ တို့နှင့် အတူတူ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားနေကျ။ ခုနှစ်တော့ မသွားနိုင်တော့ဘူး။
Are u from Bago? Have u ever been to San daw dwin road during Thingyan? It is so amazing.
I also like to stay at home in Thingyan. Have you been to Shwe Maw Daw Pagoda Festival this year? I miss it.
နင်၊ငါ၊ KN၊ MNK ရယ် ကျောင်းကြီးတွေပိတ်တဲ့အချိန် ရန်ကုန်မှာဆုံတဲ့ အချိန်က ဒီလို အချိန်ပဲလေ ။ ( ငါကိုတောင်ကျေးဇူးတွေတင်ဆိုပဲ ။ ဘာမှမမေးလို့ဆိုလား။ အဲဒီတုန်းကမီးမီးက ဘာမှနားမလည်သေးလို့ ...အဟိ.. အမှန်က MNK ကရိပ်ဖန်းသံဖန်းပြောထားလို့ ။)
သင်္ကြန်အကြိုလို့ထင်တယ် နင်တို့ကားနဲ့ အလည် ဦးက အန်တီကို တနေရာအရောက် “မှတ်မိလား။ ဒီနေရာလေးကို” မေးရော ငါတို့လေးရောက် ခွီးခွီး..ရယ်ကြတာလေ။
ရေခဲအိပ်စာမိတဲ့ အဲဒီနှစ် ကိုတော့ ငါမမေ့ပါ။ ၃-ရက်လောက်ကျောကုန်းမှာ အောင့်နေခဲ့လို့။
>> ကိုနိရဲ့ သင်္ကြန်အမှတ်တရလေးကို စိတ်ဝင်စားတယ်..အဟဲ..ပျော်စရာလေးနေမှာပဲနော်..
>> မွန်ရေ..မုန့်လုံးရေပေါ်နဲ့ ရွှေရင်အေး ပို့လိုက်မယ်နော်...။
>> သီတာရေ..ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတိုင်းပြောဖူးတဲ့ စကားလေးတခွန်းပေ့ါ..အဲဒါ..ဟဲဟဲ..
>> မနော်ရေ.. တူနေပြန်ပါပြီနော်..အဲလိုပဲ..အဲလိုပဲ..
>> ကိုအောင်သာငယ်ရေ..ကွန်မန့်လေးထားခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ..။ ၂၁-နှစ်တောင် ဝေးကွာခဲ့ရတဲ့ မြေကို ဒီအချိန်မှာ ပိုလို့ လွမ်းစရာပဲနော်..မြန်မာ့ရိုးရာ ချစ်စရာအတာသင်္ကြန်ကို အမိမြေနဲ့ ဝေးနေတဲ့ မြန်မာတိုင်း လွမ်းကြမှာပါပဲ..။
>> ကိုသီဟက ဘုန်းကြီးကျောင်း မိဘတွေနဲ့ လိုက်နေကျဆိုလို့ သာဓုပါရှင်..ဒါပေမယ့် ငယ်တုန်းပျော်ရတာမဟုတ်လား။ ပျော်စရာဇာတ်လမ်းလေးတွေ ပြန်လာရှာပါဦး..အဟဲ..
>> Jennifer... နောက်တစ်ပိုင်းမျှော်နေတယ်ဆိုလို့..ချော်လဲရောထိုင် ဆက်ရေးရရင်ကောင်းမလားပဲ..ဟဲဟဲ
>> သင်းနွယ်ဇင်..အဲ..TK ရေ..ငါတော့ သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူးဟ..ရေမွှေးလား body spray တွေလားနဲ့ လာဖြန်းတာလေ..နင့်ဆံပင်ရှည်ရှည်တွေကို ခေါင်းလျှော်ရည်တွေလား..ဟားဟား..နင်ပြောမှ..ရေးတေးတေး..
>> မမကွန်..ဘာတွေကြည့်ချင်တာလဲ ..ဒီနှစ်သင်္ကြန်လား..ကြိုးစားပါမည်..:)
>> ဝေရေ.. တို့က ပဲခူးမှာနေခဲ့ဖူးတာက ဖေဖေတို့ တာဝန်ကျလို့ပါ...ကျောင်းနေခဲ့တာကတော့ သူငယ်တန်းမှာ အမှတ်-၁ မှာ..ပဲခူးကိုသိပ်မသိဘူးလေ..။ ကျောင်းကနေ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ အိမ်ထဲမှာပဲ အနေများလို့ပါ..။
>> ကေ-မမရေ..အဲဒီအချိန်တုန်းက အသဲကွဲနေရတာနဲ့ ကြည်နူးစရာအချိန်ရယ်လို့ မထင်မိကြောင်းပါ..ဟားဟား။ နင်တောင်မှတ်မိနေသေးတယ်ပေါ့..ဟုတ်တယ်..ငါတို့တောင် အလွတ်ရနေပြီ..ဟိဟိ..
>> ပေါက်.. အစောကြီးရှိသေးတာ..တယ်ဝီရိယကောင်းပါလား..ဒီမှာတော့ ပူလိုက်တာ ၀ီခေါ်နေရတယ်.(ဘာလို့လဲမမေးနဲ့နော်..တို့လည်း တိဘူးလေ)..
အဲဒီမှာ မိုးရွာတော့ အေးနေမှာပေါ့။
သင်္ကြန်ပိုးကတော့ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ထွက်လာတဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းခွေ နားထောင်ကတည်းက သင်္ကြန်တွင်း လည်ဖို့ တာစူနေကြတယ်။ ခုနှစ်တော့ တောင်ကြီးမှာပဲ နွှဲဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
မ ဖေဖေနဲ့ မေမေက သင်္ကြန်ဖူးစာပေ့ါ… ဇာတ်လမ်းလေး အသေးစိတ်ဖတ်ချင်လိုက်တာ…
ကျွန်မတို့ အိမ်နားလေးက အန်တီနဲ့ အန်ကယ်ကတော့ ကျိူက်ထီးရိုးဖူးစာမို့နှစ်တိုင်း ကျိုက်ထီးရိုးအတူသွားကြတယ်…
ခုနောက်ပိုင်း သင်္ကြန်ပုံရိပ်တွေကတော့ မ ရယ်… ဟင်းးးးးးးးးးးးးးးးးး… သက်ပြင်းပဲချမိတော့တယ်နော်….
မသိင်္ဂီ သင်္ကြန်မှာ မဖတ်ရသေးတဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်လိုက်ပေါ့... တခါမှတော့ မလည်ဖူးဘူး။ ငယ်ငယ်ကတော့ အမေက မဏ္ဍပ်တွေ လိုက်ပြဖူးတယ်။ လိပ်ခုံးမှာ ညဘက် သီချင်းဆိုတာတွေ ကြည့်ဖူးတယ်။